जिवन आफैँमा रंगमञ्च हो – Kamdardainik
२२ चैत्र २०७७, आईतवार Santosh Khadka	0 Comments
– नायक दिनेश बुढाथोकी
कोरोना कहरका कारण सिनेमा घर सबै बन्द रहनाले यससँग सम्बन्धित कामदारहरु बेरोजगारीको स्थितिमा पुगेका छन् । लामो समय देखि नेपाली चलचित्र जगतमा सकृय रुपमा अभिनय गरिरहेका नायक दिनेश बुढाथोकी जसलाई हामी चकलेटी नायकको रुपमा पनि चिन्छौ । बुढाथोकी चलचित्र क्षेत्रका ब्यस्त कलाकारको रुपमा लिईन्छ । दोलखा, शैलुङ गा.पा.७, का बासिन्दा दिनेश बुढाथोकीले एक दर्जन म्युजिक भिडियो र धनमान, जय प्रशुराम, लिला, रुद्र, लाले आदि चलचित्रमा काम गरिसकेका छन् । अभिनयमा अब्बल दिनेश बुढाथोकी नेपाली सिने जगतका आशा लाग्दा प्रतिभा हुन् भने दर्शक र चलचित्रकर्मीको रोजाईका कलाकार हुन् । प्रस्तुत छ कामदार दैनिकको लागि अशोक खड्काले गरेको संक्षिप्त कुराकानी:
–आज भोली केमा ब्यस्त हुनुहुन्छ ?
-पछिल्लो समय लगानीकर्ताहरु चलचित्रमा खर्च गर्न डराईरहेका छन् के भन्नु हुन्छ ?
– तपाईलाई कस्तो खालको भूमिका मनपर्छ ?
– जय प्रशुराम चलचित्रबाट नेपाली सिनेमा जगतमा प्रवेश गरेसंगै पहिले र अहिलेमा के फरक पाउनु भयो ?
–सिनेमा क्षेत्रमा आउन चाहनेहरुलाई के सल्लाह दिनु हुन्छ ?
–कलाकार बाहेक तपाईंलाई सामाजिक अभियान्ता भनेर पनि चिनिन्छ ।समाज सेवा कसरी गरिराख्नुभएको छ?
म आफुलाई सामाजिक अभियान्ता भन्दा पनि सामाजिक ब्यक्ति हुँ भनेर भन्दा आनन्द लाग्छ। सामाजिक ब्यक्ति भएपछि सामाजिकसेवा भनेको आफ्नो दैनिकि जस्तो हुँदो रहेछ र त्यसैमा अभ्यस्त भइदोँ रहेछ। तर मलाई अरूले जस्तो यसो गरे भनेर प्रचारबाजी गर्नुभन्दा गुमनाम भएर दुःखीहरूको सेवा गर्न पाउदाँ आनन्द लाग्छ र त्यसै गरिरहेको छु र भोलिका दिनमा पनि गरिरहनेछु।
–अन्त्यमा जिवन के जस्तो लाग्छ?
म कलाकार भएर होला मलाई जिवन रंग मञ्च र हामी यसका कलाकार जस्तो लाग्छ किनकि जिवनमा हामीले फरक समय अनुसार फरक फरक पात्रको भुमिका निभाउनु पर्ने हुन्छ।
← दक्षिण कोरियामा राहदानीको अवधि नभए प्रवेशाज्ञा नथपिने
प्रतिनिधिसभा विशेष समय : सत्तापक्षको प्रतिरक्षा, प्रतिपक्षको आरोप →
कर्ण बहादुर विष्टउपर आर्थिक अनियमितता मुद्दा